Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKWIKWỌ ASIAN Lee Kang-in Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Anyị Lee Kang-na Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Akụkọ mmalite, Ndị nne na nna, Ezinaụlọ, Enyi nwanyị / Nwunye ka ọ bụrụ, Cgbọ ala, Net Worth, Ndụ na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, nke a bụ Ndụ Ndụ nke ndị South Korea na-agba ọsọ, site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ọdịmma gị na-enye gị nsogbu, nke a bụ oge ọ bụ nwata rue ụlọ okenye - nchịkọta zuru oke Lee Kang-inOnyinye Chukwu
Ndụ na ịrị elu nke Lee Kang-in.
Ee, mụ na gị maara banyere ịdị iche iche ya na ike ya iji nwee ike ijide bọọlụ na oghere siri ike. Agbanyeghị, eleghị anya ịgụbeghị akụkọ ndụ Lee Kang-in, nke nwere nghọta dị ukwuu. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Lee Kang-na Akụkọ Nwata:
Iji bido, Lee Kang-in mụrụ na ụbọchị nke iri na iteghete nke ọnwa Febụwarị 19 n’obodo Incheon na South Korea. Ọ bụ otu onye n'ime ụmụ atọ amụrụ ntakịrị nne ya amụrụ na nna ya, Un-Seong Lee.
Nwa okorobịa Lee tolitere na ebe amụrụ ya na Incheon (nke bụ obodo nke atọ kacha baa ụba na South Korea) na mpaghara ugwu ọdịda anyanwụ nke mba ahụ n'akụkụ ụmụnne nwanyị abụọ toro eto bụ ndị ọ ka na-ekpughe aha ha.
Hụ ebe nwata nwoke Kang-in toro na Asia.
Na-etolite na Incheon, onye na-eto eto Lee bụ nwatakịrị nwere mmasị na mmepe anụ ahụ na egwuregwu bọl. Ọ malitere ịgba bọl tupu ọ dị afọ ise, egwuregwu ụmụaka bụ nke na-aga aka na ọzụzụ ya na taekwondo.
Lee Kang-in malitere ịgba bọl tupu ọ gbaa afọ 5.
Ọ dị mma ịmara na mmasị Lee na football na taekwondo abụghị na mberede. Ha bụ ọdịmma ọ na - amasị nna ya, onye bụ onye nkuzi taekwondo na onye na - anụ ọkụ bọọlụ.
N'ihi ya, Lee nwere nkwado nna ya na ezinụlọ ya. Ha nwere olile anya na oge ndụ ya mbụ nwere mmasị na football ga-enwe njedebe obi ụtọ, dịka ọ nwere mmalite mmalite.
Ezinụlọ Lee Kang-in nyeere ya aka ịmalite ezigbo mmalite na egwuregwu ahụ ma nwee olileanya na ọdịnihu dị mma maka nwata ahụ.
Lee Kang-in Mmụta na Ọrụ Buildup:
Na-ekwu maka mbido olile anya, ị maara na nwa okorobịa Lee bụ naanị afọ 5 - ọkachasị n'ụbọchị 19th nke February 2001 - mgbe ọ malitere ịgba bọl na agbata obi ya?
Ọ malitere igwu egwu maka agbata obi ya site na afọ 5.
N'oge na-adịghị anya, ihe egwuregwu bọọlụ ghọrọ onye otu egwuregwu bọọlụ nke ụlọ akwụkwọ ya n'ihi na ọ nweghị asọmpi ọchịchị Korea ọ bụla maka ụmụaka ọgbọ ya (afọ 5) n'oge ahụ.
Oge Lee Kang-in na Football:
Mgbe Lee dị afọ 6, ọ ghọọla onye ọkpụkpọ mpaghara na-ahụ n'anya. Mmepe ahụ ji obi ike hụ ya ka ọ na-ekere òkè na egwuregwu egwuregwu telivishọn egwuregwu a maara dị ka Shoot-Dori. Ọ baghị uru ikwu ọtụtụ ihe, Lee tinye ihe ngosi egwuregwu football pụrụ iche n'ihe ngosi ahụ, mmepe nke na-abụghị sọsọ obi ọtụtụ ndị Korea kama hụrụ ndị otu ya ka ha nweta ihe nrite ahụ.
Nnukwu ihe ngosi nke football prodigy na set nke football eziokwu ngosi.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ihe malitere iyi ngwa ngwa maka ọrụ Lee. Ọ bụ onye mbụ na ụlọ akwụkwọ ntorobịa Yoo Sang-Chul ebe ọ zụrụ ọzụzụ maka tupu ọ sonye na ndị otu ntorobịa Incheon United FC U-12 na 2009. Oge ọrụ oge na - aga n'ihu hụrụ Lee na-egwuri egwu maka Flyings FC mgbe ọ bụ nwa akwụkwọ nke Seokjeong Elementary School na Incheon .
Akụkọ Lee Kang-in - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Oge mgbanwe nke ọrụ Lee bịara na 2011 mgbe ọ chọrọ iwere ọrụ ya n'ọtụtụ dị elu site n'ịga maka ego na Valencia CF na Spain. N'oge na-adịghị anya, ndị nkụzi na-eto eto ghọtara na Lee bụ onye ọkpụkpọ pụrụ iche mgbe ọ lechara ya ka o nyere bọọlụ ole na ole.
Agbanyeghị, Valencia rịọrọ siri ike chọrọ ka ezinụlọ Lee wee binyere ya na Valencia. Arịrịọ ahụ - nke ndị nne na nna Lee kwuru ee - ọ dị ka ụzọ Valencia si weghachite onye Korea dị afọ iri na-enweghị ime ka ọ dị ka ha emebila iwu site na ịbanye obere. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ ọchịchọ nke nyere aka mmepe ngwa ngwa Lee.
Ntorobịa na-eto eto ngwa ngwa na Valencia. Ekele dịrị ndị ezinụlọ ya mere mkpebi ibi na ya.
Lee Kang-in's Biography - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
Onye na-eme egwuregwu na-eto n'ike, ịdị elu na ụzọ aghụghọ n'afọ ndị sochirinụ na Valencia. O nweghi nsogbu na ịrị elu site na ọtụtụ ọgbakọ wee mechaa bụrụ ndị otu mbụ maka Los Ches na 2-1 Copa del meriri CD Ebro na ụbọchị 30 nke Ọktọba 2018. Na mbido, Lee ghọrọ ọdụdụ nwa Korea ndị na-agba ọsọ ụkwụ na mbụ iji mee ọkachamara ọkachamara na Europe.
N'ime ọnwa ndị sochirinụ, Lee mere ọhụụ La Liga & Europa League mgbe niile. Ọbụna ọ hụrụ South Korea ka ọ bụrụ ihe na-adọrọ mmasị dị ka ndị na-agba ọsọ na 2019 FIFA Under-20 World Cup ma merie onyinye Golden Ball maka ịbụ onye ọkpụkpọ kachasị mma nke asọmpi ahụ. Ihe ngosi ahụ, n'etiti ndị ọzọ, hụrụ Lee ka ọ bụrụ onye na - eto eto Asia nke Afọ na 2019. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Afọ 2019 bụ afọ Lee nke nnukwu ihe ịga nke ọma.
Lee Kang-in's Nwanyị nwanyị ::
Ihe edere na Lee Kang-in's biography agaghị ezu ezu ma ọ bụrụ na anyị aghara inye eziokwu banyere ndụ ịhụnanya ya, ọkachasị dịka ọ metụtara ya inwe ndị enyi nwanyị. N'ụzọ dị mwute, ọ dịghị ozi dịnụ na nke ahụ.
Wezọ anyị siri mata ya, Lee na-a payinga ntị nke ọma iji mee ka ọnọdụ ya dị na Valencia mbụ ebe ọ na - egwuri egwu na kpakpando dịka Ferran Torres, Daniel Parejo na Rodrigo Moreno. O nwere ike ọ gaghị ete aka tupu ụmụ nwanyị ndị nwanyị mechara dabaa na ụdị ndụ Lee.
Anyị maara na ọ nwere ike ịchọ ezigbo enyi nwanyị.
Ndụ Lee Kang-in:
Akụkọ Lee Kang-in na nwata ga-abụ ihe mara mma ma na-akpali akpali. Ekele dịrị ndị ezinụlọ ya, bụ ndị mere ka o kwe omume. N'ebe a, anyị na-enye gị eziokwu gbasara Lee Kang Na ndị nne na nna yana ndị ezinụlọ ya.
Banyere nna Lee Kang-na nne:
Un-Seong Lee, nna Lee, bu onye nkuzi Takweando na onye n'egwuregwu football. Agbanyeghị, amabeghị ọtụtụ ihe banyere nne Lee. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị maara na nne na nna ahụ hapụrụ ndụ ha na ihe niile ha nwere na South Korea iji kwado nkwado nwa ha nwoke site na isoro ya biri na Valencia. Lee hụrụ ha n'anya nha anya ma na-eme ike ya niile iji mee ka ha dị mpako.
Amabeghị ihe banyere nne na nna Lee Kang-in.
Banyere ụmụnne na ụmụnne Lee Kang-in:
Ihe ndekọ ederede banyere akụkọ ndụ Lee Kang-in na-egosi na o nwere ụmụnne nwanyị abụọ amabeghị ama. Onweghi ebe obula nwanne ya kwuru. N'otu aka ahụ, ọ dịghị ndekọ ọ bụla nke nna nna nke Midfield karịsịa dịka ọ gbasara nne na nna ya ochie. A maghịkwa nwanne nne ya, nwanne nne ya, ụmụ nwanne nne ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya.
Ndụ nke Lee Kang-in:
Ewezuga ndụ ezinụlọ Lee Kang-in na-adọrọ mmasị maka ịbụ isi ọwụwa nye ndị na-agbachitere ndị mmegide, eziokwu na echiche banyere onye na-adịghị mma bụ otu olu ma dị mma. Fans na-ekwupụta eziokwu na ọ dị umeala n'obi, na-akpali mmụọ yana okike.
Onye egwuregwu bọọlụ na-adọrọ mmasị nke ihe ịrịba ama Zodiac bụ Pisces na-eme ọtụtụ oge na-agafe maka mmasị na ntụrụndụ ya. Ha gụnyere ịme foto, ige egwu, ime njem, ịgagharị na ịntanetị, igwu mmiri na iso ndị ezinụlọ na ndị enyi na-anọrị.
Fgbanye ụgbụ bụ otu n'ime ihe omume ntụrụndụ ya.
Lee Kang-in si ebi ndụ:
Banyere otú Lee Kang-in si eme ma na-emefu ego ya, o nwere ihe ruru nde € 1 dịka nke 2020. Otutu akụnụba Midfield na-abịa site na ụgwọ na ụgwọ ọ na-enweta maka ịgba bọọlụ na egwuregwu ndị kachasị na Europe.
Ọzọkwa, Lee na-eme nnukwu ego site na nkwenye, mmepe nke na-egosipụtakwa ndụ okomoko ọ na-ebi. Ihe akaebe nke ibi ụdị ndụ a gụnyere nnabata nke Midfielder na-eme njem dị oke ọnụ yana oke ọnụ ahịa nke ụlọ / ụlọ ọ bi na Spain.
Ndị na-agba ọsọ Asia na-eto eto nwere ihe ruru € 1,00,000.
Eziokwu Lee Kang-in:
Nụ agụla ezigbo akụkọ banyere Lee Kang-in nwata na akụkọ ndụ ya. Ndị a bụ akụkọ a na-akọwaghị ma ọ bụ nke amachaghị nke ga-enyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma.
Eziokwu # 1 - rygwọ rygwọ:
N'oge ederede, nkwekọrịta Lee na Valencia na-ahụ ya na-enweta ihe ruru € 23,000 dị ka ụgwọ. Na-agbaji ihe o nwetara n'ime obere chunks, anyị nwere ihe ndị a.
Ego ụgwọ ọrụ na Euro (€)
Inye ego na olu (£)
Inye ego na dollar ($)
Kwa Afọ € 1,197,840 £ 1,041,600 $ 1,294,396
kwa ọnwa € 99,820 £ 86,800 $ 107,866
Kwa Izu € 23,000 £ 20,000 $ 24,854
Kwa .bọchị € 3,286 £ 2,857 $ 35,506
Kwa elekere € 136.9 £ 119 $ 1,479
Kwa Nkeji € 2.29 £ 1.9 $ 24,657
Sekọnd € 0.04 £ 0.03 $ 0.4
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Lee Kang-in'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Chaị! You maara? Nwoke na-eto eto na South Korea nke na-akpata ihe ruru € 2,411 kwa ọnwa ga-arụ ọrụ ihe dị ka afọ atọ na ọnwa isii irite Lee Kang-ins ụgwọ kwa ọnwa.
Dị ka ibe ya Korea - Nwa Heung-min, Lee enweghị egbugbu ma, o yikarịrị ka ọ gaghị enweta. Onye ọkpụkpọ egwuregwu ahụ nwere ọkacha mmasị na ilele ibu ya (68KG) yana ịme ihe kachasị mma n'ịdị elu ya (5 ụkwụ 8 sentimita asatọ).
Eziokwu # 3 - Rating FIFA:
You maara na Lee nwere ọkwa FIFA dara ogbenye nke ihe 71 dị ka nke May 2020? ọnụego ahụ egosighi mmụba dị mkpa nke onye ọkpụkpọ na-enweta atụmatụ oge niile na Champions League tupu ntiwapụ nke ọrịa Coronavirus. Ya mere, ọ bụ naanị oge tupu anyị ahụ ọkwa ndị midfielder gosipụtara ikike ya nke 88 isi.
O meela mgbanwe ugbu a nke mere ka ọ bịaruo nso iji nweta ọkwa ya nke 88.
Eziokwu # 4 - Trivia:
2001 abụghị naanị afọ ọmụmụ nke Lee Kang-in. Ọ bụ afọ nke encyclopedia Wikipedia nwere n'efu na-akwụ ụgwọ dịka Wikipedia gara n'ịntanetị. Ọ bụkwa afọ ahụ kọmputa nke Apple wepụtara iPod. N'ebe nkiri dị ka Planet of The Apes, Shrek na Ocean Eleven kụrụ sinima n'otu afọ ahụ.
Eziokwu # 4 - Exemhapụ ndị agha:
Citizensmụ nwoke nke South Korea ga-enwerịrị ọrụ agha nke dịkarịa ala ọnwa 21. Agbanyeghị, enwere ohere maka ndị na-enyere mba ahụ aka inweta nnukwu nsọpụrụ dịka aha iko bọọlụ. Lee enwebeghị mmeri nye mba ya. Agbanyeghị na ọ mere nke ọma iduru ndị otu U20 nke South Korea rue ọkara nke ikpeazụ nke iko ụwa, mbọ ya ezughi iji nweta nnabata.
Ka o siri dị, ọ nwere ike itinye oge nga ma ọ bụ mmachibido iwu site na mba ahụ ma ọ bụrụ na ọ naghị akwụ ụgwọ tupu ya agbachie afọ 28. Onye ọrụ ibe ya nke Korea Son Heung-minLee nwetara nnwere onwe site na iduga South Korea iji merie ọla edo na Egwuregwu Eshia na 2018. Lee nwere ike ịbụ akụkụ nke ndị otu egwuregwu, mana o nwere nchegbu gbasara ike ọgwụgwụ ma hapụ ohere ahụ.
Onye na-egwu egwu na-eche ọrụ nwere ike imebi iwu agha ma ọ bụrụ na ọ nwetaghị nnabata.
Aha n'uju Lee Kang-in
Ụbọchị ọmụmụ Thbọchị 19 nke Mach 2001
Age 19 (ka nke ọnwa Mee 2020)
Ndị nne na nna Un-Seong Lee (nna)
omume ntụrụndụ Na -eche maka foto, na-ege egwu, na-eme njem, na-achọ ịntanetị, na igwu mmiri.
elu 5 ụkwụ 8 sentimita
Arọ 68 kg
Ngwakọta Net € 1,000,000
Egwuregwu Ọnọdụ. Na-awakpo Midchester
Daalụ maka ịgụ ihe edemede mbụ a banyere akụkọ ndụ Lee Kang-in. Na Ndụ ndụ, anyị na-agba mbọ maka izi ezi na izi ezi n’usoro anyị na-ewepụta eziokwu banyere ndu na akụkọ nwata. Seennu ahụla ihe ọ bụla dị njọ n'anya n'isiokwu a? Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụ tinye okwu na igbe dị n'okpuru.
Bọchị agbanwee: Disemba 28, 2020
Bọchị gbanwee: Jenụwarị 4, 2021